XOG:- Waxyaabaha ugu yaabka badan ee haatan ka socdo doorashada dalka ka dhaceeysa sanadkaan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Waxyaabaha ugu yaabka badan ee haatan ka socdo doorashada dalka ka dhaceeysa sanadkaan
Waxyaabaha ugu yaabka badan ee doorashada dalka sanadkaan 2016-ka ka dhaceeysa dalka Soomaaliya ayaa ah farsamo musuq-maasuq ah oo ay musharixiinta kuwooda lacagta iyo magaca leh usoo maareeyeen in lasoo doorto.
Xubnaha u tartameysay Aqalka Sare ayaa ahaa kuwa ugu weyn ee ugu musuq-maasuqa badani oo dhacday, maadaama xubnahaasi tartameeysay ay soo magacaabayeen madaxda maamulada dalka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxaa musharixiinta la doonayo in xilka ay kusoo baxaan marka hore soo magacaabaya madaxweyne maamul goboleed ama mid federaal, kadibna waxaa loo raadinayaa qof magac u yaal ah oo xilka kula tartama.
Sidoo kale, waxaa qofkaasi soo xulanaya musharaxa weyn laftiisa, waxaana dhaceeysa inuu ka bixiyo lacagta is-diiwaan gelinta, kadibna la siiyo kharash kale oo shaqsiyadiisa lagu iibsaday, sidaasina ayaana kuraas badan lagu helay.
Xilliyada qaarkood waxaa dhacda in qofkii la keensaday uu tanaasulo doorashada kahor oo musharixii weynaa kaliya kusoo haro tartanka, kadibna meesha cod gacan taag ah loogu codeeyo musharaxaas.
Musharaxinta qaabkaan kuraasta ugu guuleystay aad ayay u fara badan yihiin, waxaase ugu waaweyn shaqsiyaadka sidaas ku guuleystay ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, Jeneraal C/laahi Fartaag, C/raxmaan Faroole, Muuse Suudi Yalaxoow iyo mas’uuliyiin kale oo aan inta lagu soo koobi karin.